Dispear CD/DVD Drive - keywords HERE
Home » window » Dispear CD/DVD Drive
Dispear CD/DVD Drive
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်က ကျွန်တော့်ဆီ အီးမေးလ်တစ်စောင် ၀င်လာပါတယ်။ DVD Drive က My Computer ထဲမှာ မပေါ်တော့လို့ ဆိုပြီး မေးထားပါတယ်။ သူ့မေးခွန်းမှာက Device Manager ထဲ ၀င်ကြည့်တော့လဲ DVD Drive ရဲ့ ဘေးမှာ Caution Sign ပုံလေး ပြနေတယ်ဆိုတာပါ ထည့်ရေးထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်အထင်က Driver ပျောက်သွားလို့ အဲဒီလိုဖြစ်တာပေါ့။ Driver ပြန်တင်ကြည့်လိုက်လို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ ဖြေလိုက်မိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ CD/DVD Drive တွေ Driver ပျောက်တယ်ဆိုတာမျိုးကို တစ်ခါမှ မကြားဖူးပါဘူး။ ကြုံလည်း မကြုံဖူးပါဘူး။
နောက် မကြာခင်ပဲ သူက အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်း reply လုပ်ပါတယ်။ သူ့ Laptop က Dell ဆိုတော့ Dell ကို မေးလိုက်တာနဲ့ တူပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဆီကို သူနဲ့ Dell က Help Desk နဲ့ ပြောကြတာတွေကို ရှယ်ယာ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Dell က ပြောတဲ့ ဖြေရှင်းနည်းက ကျွန်တော် တစ်ခါမှ မကြားဖူးတဲ့ မတွေ့ဘူးတဲ့ ဖြေရှင်းနည်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့်လိုပဲ မသိသေးသူတွေ သိရအောင်၊ ကွန်ပျူတာမှာ CD/DVD Drive တွေ မသိတော့ရင် လုပ်ဆောင်ကြည့်သင့်တဲ့ ဖြေရှင်းနည်းလေးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
My Computer တွင် CD/DVD Drive မပေါ်ပါ။ Device Manager တွင်လည်း CD/DVD Drive ၏ ဘေးတွင် အ၀ါရောင် Caution Sign လေး ပေါ်နေသည်။ Properties တွင်(Windows cannot load the device driver for this hardware. The driver may be corrupted or missing. (Code 39) ဟု ပြသနေသည်။
Upper Filter နှင့် Lower Filter များကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Upper Filer Lower Filter ဆိုသည်မှာ ထို CD/DVD Drive ၏ Driver ကို ထိန်းချုပ်ပေးသော Registry Key များ ဖြစ်သည်။ ထို Key နှစ်ခုကို Registry မှ ဖျက်ပစ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါသည်။
1. Click Start>Run> and type regedit and press Enter.
3. Click Yes to confirm the removal of the UpperFilters registry entry.
4. In the right pane, right-click LowerFilters, and then click Delete.
5. Click Yes to confirm the removal of the LowerFilters registry entry.